ढिलो आउने कविशिरोमणि माविका शिक्षकलाई अभिभावकले गेटबाटै फर्काइदिए - Janasamsad
ढिलो आउने कविशिरोमणि माविका शिक्षकलाई अभिभावकले गेटबाटै फर्काइदिए
५ असार २०७९, आईतवार १६:११ मा प्रकाशित
धुलाबारी । मेचीनगर वडा नंं. ९ को कविशिरोमणि माविको शैक्षिक स्तर खस्किएको भन्दै अभिभावकहरुले आइतबार विद्यालय घेराउ गरेका छन् । विहान ९ः४५ बजे विद्यालय परिसर पुगेका अभिभावकहरुले समयमा नआउने शिक्षकहरुलाई विद्यालय प्रवेशमा रोकसमेत लगाएका छन् । विद्यालय समयमा गेटमा भेला भएका अभिभावकहरुले ढिलो आउने शिक्षकलाई गेटबाटै फर्काइदिएका हुन् ।
कुनैबेला जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यालयमा पर्ने कविशिरोमणि माविको शैक्षिक स्तर खस्किएपछि अभिभावकहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । अभिभावकहरुका अनुसार सो विद्यालयको शैक्षिक वातावरण नराम्ररी खस्किएकाले विद्यार्थीहरु विद्यालय छाड्न बाध्य भएका छन् । अलिक तल्तिर धुलाबारी माविमा विद्यार्थी खचाखच हुनु तर यहाँ किन घटिरहेका छन् ? भन्दै अभिभावक भुपेन्द्र पाठकले प्रश्न गरेका छन् । विद्यालय स्रोतका अनुसार हाल ५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । कुनैबेला उक्त विद्यालयमा १५०० विद्यार्थी अध्ययनरत् थिए । कक्षा ५ सम्म त झन् विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको स्वयम् विद्यालय प्रशासन बताउँछ ।
अभिभावकहरुले छड्के अनुगमन गरेपछि विद्यालय प्रशासनसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा अभिभावक तथा सामाजिक अभियन्ता मुकेश लिम्बू, कपिल चापागाईं, पूर्व जनप्रतिनिधि इन्द्र प्रधान, चन्द्रकला खवासलगायतले विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरुले के कारण विद्यालय यो अवस्थामा आइपुगेको हो भन्दै विद्यालय प्रशासनसँग जवाफ मागेका गरेका थिए । छलफलमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले विद्यालयको पढाइ स्तर खस्किएको स्वीकार गरे । उनले स्रोतसाधन सम्पन्न भएपनि विद्यालयलाई माथि उठाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए । विद्यालयप्रति यहाँहरुको चिन्ता र चासो स्वाभाविक भएको शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष चुडामणि रेग्मीले बताए । उनले अभिभावकहरुको सल्लाह र सुझावलाई ग्रहण गर्दै विद्यालय नमूना बनाउन खोजिरहेको स्पष्ट पारे । विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक स्तर बढाउन प्रयत्न गरिरहेको बताए । उनले त्यसका लागि सिंगो विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । उक्त विद्यालयमा शिक्षकहरुबीच एकले अर्कालाई नमान्ने र ठालु पल्टिने प्रवृत्ति रहेको बताइएको छ । केही शिक्षकहरु समयमा नआउने र कक्षा कोठामा मोवाइल चलाएर बस्ने गरेका छन् ।
प्रअले शिक्षकहरुलाई निर्देशन दिँदा नमान्ने र गुटगत राजनीति हावी हुँदै गएको छ । जसका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बन्ने खतरा रहेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।
लायन्स क्लब अफ मेचीनगरको पद हस्तान्तरण
मृत्यु भएको साढे २ महिनापछि अमृताको अन्त्येष्टी हुँदै
१० असार २०७९, शुक्रबार ०९:१२
समाचार प्रभाव ः १० बजे विद्यालय पुग्दा देखियो यस्तो फरक दृश्य
६ असार २०७९, सोमबार १५:३२